Birth Spacing - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကလေးတဈယောကျမှေးပွီးတဲ့အမတှေကေို ပတျဝနျးကငျြကမေးလရှေိ့ပါတယျ။နောကျတဈယောကျကော မယူသေးဘူးလား ? အဲ့လောကျကွီးတဈယောကျနဲ့တဈယောကျမခွားနဲ့လေ ” ဆိုတော့ကာကြှနျမတို့ အမြိုးသမီးတှမှောမေးစရာမေးခှနျးတဈခုပျေါလာပါတယျ။” ကလေးတဈယောကျနဲ့တဈယောကျဘယျလောကျခွားဖို့သငျ့လဲ” ဆိုတာပေါ့။ဆေးပညာဘကျကပွောရရငျတော့ ကလေးတဈယောကျနဲ့တဈယောကျနီးလှနျးရငျမကောငျးပါဘူး။ခန်တာကိုယျမှာရှိတဲ့သှေးအား ပုံမှနျပွနျဖွဈဖို့၊ သားအိမျ ပုံမှနျအရှယျအစားရဖို့ကို ၁၈လ ကနေ ၂၄လ ( ၁နှဈခှဲမှ ၂နှဈအထိ ကွာမွငျ့နိုငျ ပါတယျ။ဒီတော့ ၂နှဈကျြော ၃ နှဈကွာမှ ကလေးယူဖို့ ခန်တာကိုယျကအဆငျသငျ့ဖွဈတယျဆိုတယျ့သဘောပါပဲ။တကယျလို့ ဒီလိုမစောငျ့ဘဲ ယူမယျဆိုရငျ
_ သှေးအားနညျးလို့ နှလုံးမခံနိုငျတာ၊
ကလေးအမေ အသကျကွီးသှားလို့ နောကျကလေးရဲ့ ဉာဏျရညျအတှကျ စိတျပူရမှာဖွဈသလို ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျသှေးတိုးခွငျးပိုဖွဈပှားနျုငျပါတယျ။
ဒီတော့ ကလေးတဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ၂နှဈအောကျလညျး မခွားဘဲ ၅နှဈထကျကြျောအောငျလညျး မခွားဘဲယူရငျ အသငျ့တျောဆုံးပါဘဲလို့အကွံပေးခွငျပါတယျ။မိဘနရောက ဝငျစဉျးစားပွီးပွောရမယျဆိုရငျတော့_ ကလေးကို ၃ နှဈလောကျစီခွားပွီးယူမယျဆိုရငျ…ကလေး၂ယောကျဟာအရှယျသိပျမကှာတာမို့ တဈယောကျသုံးပွီး ပုခကျ၊ တှနျးလှညျး စတာတှေ နောကျတဈယောကျမှာပွနျသုံးလို့ရပါတယျ။အမအေနနေဲ့လညျး ကလေးငယျငျး ၂ယောကျကို တဈခါထဲစောငျ့ရှောကျလိုကျရသလိုဆိုတော့ အခြိနျပေးရတာတနျသလိုရှိပါတယျ။ကလေး ၂ယောကျ ကစားဖျောရသလို၊ အထီးကနျြသလို ခံစားရနိုငျခွေ နညျးပါးတယျ။မကောငျးတဲ့ဘကျကတော့ မမေတေို့အနနေဲ့…ကလေးအခငျြးခငျြး မနာလိုစိတျလေးတှရျှေတတျတာ ကို သတိပွုစလေိုပါတယျ။
_ ကလေးကို ၅နှဈ မှ ၁၀ နှဈအထိ ခွားပွီးယူမယျဆိုရငျကောငျးတဲ့ဘကျကကွညျ့မယျဆိုရငျ…ကလေးတဈယောကျဆီကိုသခြောအခြိနျပေးနိုငျမယျ။ ကလေးတဈယောကျနဲ့တဈယောကျကွားမှာ ကိုယျ့ကိုယျကို အပနျးဖွအေနားပေးသလိုအခြိနှရနိုငျမယျ။နောကျကလေးမှေးတဲ့အခြိနျမှာ ပထမကလေးက အနညျးငယျကွီးနပွေီမို့ မမေတေို့အတှကျ တဈဖကျတဈလမျးကူဖျောလောငျဖကျတောငျဖွဈနိုငျပါသေးတယျလကေလေး နှဈယောကျလညျး အသကျကှာတာမို့ အခငျြးခငျြး မနာလိုတာ၊ ကစားစရာလုလို့ရနျဖွဈတာတှအေတှကျလညျး စိတျပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နျော။
မကောငျးတဲ့ဘကျကဆိုရငျတော့…အရာရာအသဈလိုပွနျဖွဈသှားပါတယျ။ ကိုယျဝနျဆောငျခြိနျ ပြို့အနျတာကအစကလေး ၂ယောကျ နှဈတှခွေားသှားတဲ့အခါ သားဦးလို အရမျးပြို့အနျတာဖွဈနိုငျပါတယျ။ကလေးငယျလေးပွုစုထိနျးကြောငျးတဲ့အခါ ကလေးအကွီးကြောငျးသှားဖို့လုပျရတာနဲ့ဆိုတော့ အလုပျ နှဈခုပွငျဆငျရတာမတူသလို ပိုပငျပနျးရတတျပါတယျ။ကလေးတဈယောကျနဲ့တဈယောကျ ဘယျလောကျခွားပွီးယူမယျဆိုတာ
မိသားစုအိမျမကျအနနေဲ့ ဘယျနယောကျယူမယျဆိုတာရယျ၊ မမေရေဲ့အသကျအရှယျပျေါမှာအဓိကမူတညျတာမို့ ဒီဆောငျးပါးဖတျရငျးအတှေးလေးတဈခုရပါစေ မြှျောလငျ့ရငျး
ကလေးတစ်ယောက်မွေးပြီးတဲ့အမေတွေကို ပတ်ဝန်းကျင်ကမေးလေ့ရှိပါတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကော မယူသေးဘူးလား ? အဲ့လောက်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မခြားနဲ့လေ ” ဆိုတော့ကာကျွန်မတို့ အမျိုးသမီးတွေမှာမေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုပေါ်လာပါတယ်။” ကလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ဘယ်လောက်ခြားဖို့သင့်လဲ” ဆိုတာပေါ့။ဆေးပညာဘက်ကပြောရရင်တော့ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နီးလွန်းရင်မကောင်းပါဘူး။ခန္တာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးအား ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့၊ သားအိမ် ပုံမှန်အရွယ်အစားရဖို့ကို ၁၈လ ကနေ ၂၄လ ( ၁နှစ်ခွဲမှ ၂နှစ်အထိ ကြာမြင့်နိုင် ပါတယ်။ဒီတော့ ၂နှစ်ကျေ်ာ ၃ နှစ်ကြာမှ ကလေးယူဖို့ ခန္တာကိုယ်ကအဆင်သင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတယ့်သဘောပါပဲ။တကယ်လို့ ဒီလိုမစောင့်ဘဲ ယူမယ်ဆိုရင်
_ သွေးအားနည်းလို့ နှလုံးမခံနိုင်တာ၊
ကလေးအမေ အသက်ကြီးသွားလို့ နောက်ကလေးရဲ့ ဥာဏ်ရည်အတွက် စိတ်ပူရမှာဖြစ်သလို ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်သွေးတိုးခြင်းပိုဖြစ်ပွားန်ုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ၂နှစ်အောက်လည်း မခြားဘဲ ၅နှစ်ထက်ကျော်အောင်လည်း မခြားဘဲယူရင် အသင့်တော်ဆုံးပါဘဲလို့အကြံပေးခြင်ပါတယ်။မိဘနေရာက ဝင်စဉ်းစားပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့_ ကလေးကို ၃ နှစ်လောက်စီခြားပြီးယူမယ်ဆိုရင်…ကလေး၂ယောက်ဟာအရွယ်သိပ်မကွာတာမို့ တစ်ယောက်သုံးပြီး ပုခက်၊ တွန်းလှည်း စတာတွေ နောက်တစ်ယောက်မှာပြန်သုံးလို့ရပါတယ်။အမေအနေနဲ့လည်း ကလေးငယ်င်း ၂ယောက်ကို တစ်ခါထဲစောင့်ရှောက်လိုက်ရသလိုဆိုတော့ အချိန်ပေးရတာတန်သလိုရှိပါတယ်။ကလေး ၂ယောက် ကစားဖော်ရသလို၊ အထီးကျန်သလို ခံစားရနိုင်ခြေ နည်းပါးတယ်။မကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ မေမေတို့အနေနဲ့…ကလေးအချင်းချင်း မနာလိုစိတ်လေးတွေရ်ှတတ်တာ ကို သတိပြုစေလိုပါတယ်။
_ ကလေးကို ၅နှစ် မှ ၁၀ နှစ်အထိ ခြားပြီးယူမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်…ကလေးတစ်ယောက်ဆီကိုသေချာအချိန်ပေးနိုင်မယ်။ ကလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကြားမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပန်းဖြေအနားပေးသလိုအချိနွရနိုင်မယ်။နောက်ကလေးမွေးတဲ့အချိန်မှာ ပထမကလေးက အနည်းငယ်ကြီးနေပြီမို့ မေမေတို့အတွက် တစ်ဖက်တစ်လမ်းကူဖော်လောင်ဖက်တောင်ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်လေကလေး နှစ်ယောက်လည်း အသက်ကွာတာမို့ အချင်းချင်း မနာလိုတာ၊ ကစားစရာလုလို့ရန်ဖြစ်တာတွေအတွက်လည်း စိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။
မကောင်းတဲ့ဘက်ကဆိုရင်တော့…အရာရာအသစ်လိုပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ပျို့အန်တာကအစကလေး ၂ယောက် နှစ်တွေခြားသွားတဲ့အခါ သားဦးလို အရမ်းပျို့အန်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကလေးငယ်လေးပြုစုထိန်းကျောင်းတဲ့အခါ ကလေးအကြီးကျောင်းသွားဖို့လုပ်ရတာနဲ့ဆိုတော့ အလုပ် နှစ်ခုပြင်ဆင်ရတာမတူသလို ပိုပင်ပန်းရတတ်ပါတယ်။ကလေးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဘယ်လောက်ခြားပြီးယူမယ်ဆိုတာ
မိသားစုအိမ်မက်အနေနဲ့ ဘယ်နယောက်ယူမယ်ဆိုတာရယ်၊ မေမေ့ရဲ့အသက်အရွယ်ပေါ်မှာအဓိကမူတည်တာမို့ ဒီဆောင်းပါးဖတ်ရင်းအတွေးလေးတစ်ခုရပါစေ မျှော်လင့်ရင်း
Tips for those with first pregnancy